China Fiberglass voatetika strand Mat Emulsion Binder mpanamboatra sy mpamatsy | Beihai Fiberglass
1.Izany dia vita amin'ny kofehy voapaika an-tsokosoko nitazona mafy kokoa tamin'ny binder emulsion.
2.Mifanaraka amin'ny resins UP, VE, EP.
E-Glass Emulsion Voadidy Strand Mat dia vita amin'ny kofehy voadinika an-tsokosoko voafatotra mafy kokoa amin'ny binder emulsion. Izy io dia mifanaraka amin'ny resin UP, VE, EP. Ny sakany horonana dia manodidina ny 50mm ka hatramin'ny 3300mm.
● Mando tsara ary mando haingana amin'ny resina, mamoaka rivotra haingana
Ny fampiharana farany ampiasaina dia misy sambo, kojakoja fandroana, kojakoja môtô, fantsona mahazaka harafesina simika, fiara mifono vy, tilikambo mangatsiaka ary kojakoja fananganana.
● Ny famaritana manokana dia azo averina arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Ny Mats Strand Mat tsirairay dia voadona amin'ny fantsom-taratasy izay misy savaivony anatiny 76mm ary ny savaivony dia 275mm ny savaivony. Fonosina sarimihetsika plastika ilay horonana mat, ary avy eo fonosina anaty boaty baoritra na fonosina taratasy kraft. Ireo horonan-taratasy dia azo apetraka mitsangana na mitsivalana. Ho an'ny fitaterana, ny horonan-taratasy dia azo ampidirina anaty cantainer mivantana na amin'ny paleta.
Teo aloha: BMC
Manaraka: Direct Roving ho an'ny pultrusion
Fiberglass stitched Mat Amin'ny Voanjo voatetika